‘Misy Hatrany Foana Ny Fisehoana Endrika Miabo , Mahery Ary Mandrisika Ny Vehivavy Mainty Hoditra’ · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraRian de la Torre
Voadika ny 18 Jona 2016 5:43 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Italiano, Español
Beti Ellerson. Sary natolotry ny www.londonfeministfestival.com
Mpitia fatratra amin'ny fanampiana ny vehivavy Afrikana hitantara ny tantarany amin'ny alàlan'ny fakan-tsary i Beti Ellerson mba hahafahan'izy ireo hiresaka momba ny Afrika hafa noho ilay iray izay efa fahitantsika amin'ny fampitam-baovao mahazatra.
Iza moa i Beti Ellerson? Eny, mpanatontosa sarimihetsika Amerikana izy, manam-pahaizana, ary mpikatroka sy Talen'ny Foibe ho an'ny Fandalinana sy Fikarohana Ho An'ny Vehivavy Afrikana Amin'ny Sarimihetsika ihany koa, asa izay ampiarahany amin'ny fanitsiana ny bilaogy African Women in Cinema (Vehivavy Afrikana ao amin'ny Sarimhetsika), amin'ny fampianarana, ary ireo tetikasan-tsarimihetsika hafa
Namokatra sarimihetsika mitondra ny lohateny hoe Sisters of Screen sy andian-tantara Reels of Colour i Beti izay nalefa tamin'ny 1997 ka hatramin'ny taona 2000 tany Etazonia. Manana ny diplaoma dokotorà ihany koa izy amin'ny Fianarana Afrikana ao amin'ny sampana Fianarana Sarimihetsika Afrikana sy ny Fianaran'ny Vehivavy. Vehivavy feminista mavitrika izy izay namoaka sy nilaza betsaka an-kalalahana momba ny vehivavy Afrikana. Tamin'ny 2011, nahazo ny “Fankasitrahana Ny Vehivavy Miavaka Amin'ny Sarimihetsika Afrikana ” izy izay nokarakarain'ny vehivavy mpanatontosa sarimihetsika Zimbaboeana .
Tsy hiandry ela intsony isika, fa avelako eto ianao hanaraka ny dinidinika izay nifanaovako tamin-kafaliana niaraka tamin'i Beti.
Global Voices (GV): Nahoana ianao no liana tamin'ny sarimihetsika Afrikana?
Beti Ellerson (BE): Satria ao amin'ny sarimihetsika Afrikana no nahitako ny fomba mivantana hifandraisana amin'ny raharaha afrikana tamin'ny fomba mandresy lahatra sy lalina kokoa . Raha amin'ny lafiny akademika, fitaovana iray izany ho fampianarana sy fianarana izay afaka ampiasaiko amin'ny fomba ifandraisan'ny fifampifehezana isankarazany: ny fianaran’ ireo vehivavy, ny tantara, ny teny, ny literatiora sy ny kolontsaina, ny sosiolojia, ny antrôpolojia ary eny fa na dia ny siansa sy ny filozofia aza.
GV: Ahoana no hamaritanao ny feminisma?
BE: Amin'ny ankapobeny, ny fahitako ny feminisma dia fomba iray entina mieritreritra, izay lôjika iray afahana miaina sy manana traikefa amin'ny fiainana eo amin'ny hoe ahoana no ifandraisan'ny fitovian'ny lahy sy ny vavy ary hitako koa ho toy ny foto-kevitra izay azo ampiasaina ara-teorika mba hamolavolana fanontaniana momba ny vavy sy ny lahy, ny toerana misy anao sy ny maha ianao anao. Efa hatry ny ela aho no feminista, noho izany ho ahy, dia dingana ara-politika sy dingana ho ahy manokana izany.
GV: Hatramin'ny niorenan'ny Foibe Fandalinana sy Fikarohan'ny Vehivavy Afrikana tamin'ny 2008, ny vehivavy Afrikana mpamokatra sarimihetsika ve araka ny hevitrao efa nahatratra ny tanjona ny amin'ny fahombiazana lehibe kokoa sy ny fankatoavana?
BE: Te hiteny aho hoe eny, nefa tsy noho ny Foibe. Hitako ny fivoarana tamin'ny lahateny manodidina ny fanehoana ny vehivavy mainty hoditra tao anatin'ny folo taona hatraiza hatraiza. Efa nandalo laza ambony kokoa sy fankasitrahana ny asan'ny vehivavy Afrikana vokatry ny fiparitahan'ireo teknolojia vaovao efa hita na aiza na aiza ary indrindra fa noho ny aterineto sy ny tambajotra sosialy . Raha ny lafin'ny fikarohana sy ny fianarana, te-hieritreritra aho fa ny Foibe sy ny asako momba ny vehivavy Afrikana ao amin'ny sarimihetsika dia nanana fiantraikany teo amin'ny vatsim-pianarana sy ny lahateny teo amin'ny sehatry ny Fianarana Sarimihetsika Afrikana, ny Fianaran'ny vehivavy, ary ny Fitsikerana Sarimihetsika Feminista.
GV: Ampy ve ny fanohanana ho an'ny vehivavy Afrikana ho lasa mpamokatra sarimihetsika?
BE: Na dia tokony hisy betsaka kokoa aza, dia tsy maintsy miteny aho fa efa nisy ny fitomboana mahatalanjona tamin'ny tombontsoa sy ny fanohanana amin'ny ezaka famokarana sarimihetsika ho an'ny vehivavy Afrikana ao an-toerana, sy manerana ny kôntinanta, ary maneran-tany. Averiko indray fa ny firongatry ny teknolojia vaovao nandritra ny taonjato faha-21 no antony lehibe nahatonga ny firoboroboan'izany fanohanana izany. Ankehitriny maro ireo vehivavy no tafakatra amin'ny sehatry ny fisoloan-tena sy ny paikady mba hahazoana mpanaraka maro izay mamela ny feon'izy ireo ho re maneran-tany. Ary, raha ny marina, dia mihaino azy ireo ny olona!
GV: Inona no torohevitra omenao ny vehivavy Afrikanina na ny vehivavy taranaka Afrikanina izay te-hanomboka ny asany ao amin'ny indostrian'ny sarimihetsika?
BE: Noho ny kolontsaina ara-tsarimihetsika izay tsy mitsahatra ny mivoatra, dia maniry aho ny hanitatra “ny indostrian'ny sarimihetsika ” ary hampiditra ireo fampitan-kevitra vaovao ho ao anatiny hamaritra indray ny “sarimihetsika.” Koa, araka izay efa voalazako teo aloha: tsara ny manamarika ny maha zava-dehibe an'ireo izay lasa eo aloha, mba hihaino ireo teniny sy hianatra lesona iankinan'ny aina tamin'izay efa nodiavin'izy ireo. Amin'ny alàlan'ny fihainoana ny teniny no andrenesantsika ny antony maro nahatongavan'izy ireo teo amin'ny sarimihetsika: mba hilaza tantara, mba haneho ny maha izy marina an'i Afrika, mba hanova ny fiheveran-diso sy ny fanehoana amin'ny endrika tokana mivadika ambony ambany an'i Afrika.
GV: Avy aiza ny antony manosika anao hanao ny tetikasa?
BE: Ny faniriako hizara ny fahalalana no nanosika ahy, mba hanohanana sy hampiroboroboana ireo tantara, ny asa sy ny traikefan'ireo vehivavy Afrikana, ireo zokiolona, ​​ary ireo vehivavy nialoha làlana teo amin'ny sehatry ny efijery.
GV: Moa ve manova ny endrika ijerena ara-batan'ny vehivavy sy ny fiheveran-diso izay efa noeritreretina momba ny vehivavy mainty hoditra ny fidirany bebe kokoa ao amin'ny tontolon'ny sarimihetsika ?
BE: Izay indrindra no efa tanjona lehibe nandritra izay fotoana izay, na dia somary eo ho eo ihany aza ny vokany. Nisy ny fivoaran'ny fomba fijery mankany amin'ny tena izy, izay mifanohitra amin'ny fiheveran-diso raha amin'ny lafiny tsara. Etsy ankilan'izany, miaraka amin'ny fihanaky ny votoaty sy ny fampitam-baovao hampielezana izany endrika izany, dia mbola maro ireo asa tokony hatao mba ahazoana antoka fa efa voahitsy ilay fiheveran-diso. Kanefa eny, raha ny marina, misy hatrany ny fisehoana endrika miabo, mahery ary mandrisika ny vehivavy mainty hoditra’